हुम्ला र बाजुरामा भारी हिमपात, देशभरीको मौसम चिसो - हुम्ला र बाजुरामा भारी हिमपात, देशभरीको मौसम चिसो
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ८ माघ, 08:33:04 AM
काठमाडौं । गएरातिदेखि अचानक परेको भारी हिमपातले हुम्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । हुम्लामा सोमबार रातिदेखि हिमपात हुनुका साथै हुरी चलिरहेको छ । हिमपातले सदरमुकाम सिमकोट आवतजावत गर्न समस्या बनाएको छ । अचानक सोमबार रातिदेखि हिमपात हुन थालेपछि स्थानीयवासीलाई घरबाहिर निस्कनसमेत समस्या भएको छ ।
हिमपात हुँदा एसइई तयारी गर्न ‘ट्युसन’ पढ्ने विद्यार्थीको समेत बिहानको पढाइ बन्द भएको छ । जिल्लामा भारी हिमपात हुँदा पढाइ बन्द गर्नुपरेको मानसरोवर माविका शिक्षक धनबहदुर ऐडीले बताए । यसअघि हिमपात हुँदा ‘ट्युसन’ सञ्चालन गरिए पनि सोमबार रातिदेखि हिमपातसँगै चलेको हुरीले पढाउन नसकिएको शिक्षक ऐडीले बताए।
उता बाजुरामा पनि हिमपात भएको छ । पुसको पहिला सातादेखि माघ दोस्रो सातासम्म जिल्लामा तीन पटक हिमपात भएको हो । पुसमा मात्र दुई पटक हिमपात भएको थियो ।
सदरमुकाम आसपासको जङ्गलमा झण्डै आधा फिट हिउँ जमेको छ । त्यहाँका मानिस घरमा आगो तापेर बसेका छन् । हिमपातले सबैभन्दा जिल्लाको उच्च भेगको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ भने पोरखे लेकमा धेरै हिउँ परेका कारण मार्तडी कोल्टी सडकमा चल्ने ट्र्याक्टर र जीप सेवासमेत बन्द भएको स्वामिकात्तिक यातायात प्रालिका काउण्टर इन्चार्ज निशान्त रोकायाले जानकारी दिनुभएको छ । मान्छेको आवतजावतसमेत रोकिएको उनले बताए ।
देशका उच्च पहाडी भागमा बाक्लो हिमपात र हावाहुरी चलेसँगै देशभरीको मैसम चिसो भएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत तराईका जिल्लाहरुमा पनि चिसोका कारण जनजिवन प्रभावित बनेको छ ।
२०७५, ८ माघ, 08:33:04 AM
लम्बियो हिउँदे झरी : काठमाडौंमा बिहानैदेखि हल्का वर्षा !
आजबाट देशभरीकै मौसम बदली : मध्यमदेखि हल्का बर्षा र हिमपात !
पश्चिमी वायु सक्रिय : आज देशभर सामान्य बदली हुने सम्भावना !